intaba imbono-kwikona kwi-landscape - I-Airbnb
intaba imbono-kwikona kwi-landscape
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRotem
Iyunithi encinci kunye netofotofo phantsi kwekhaya lethu losapho. Ijikelezwe ziimbono eziphefumlayo, eziqaqambileyo kunye ne-air-conditioning.
I-terrace enkulu onayo kuphela, ikona kaDonny kwi-terrace ejongene nembono kunye nokwehla ukuya kwiihambo zendalo.
Ifanelekile isibini okanye enye.
Ilungele abo bafuna indawo esondeleneyo nethuleyo yokudala, ukubhala okanye inkqubo yobuqu.
Yonwabela imfihlo epheleleyo kunye nethuba lokuodola ukhetho lokuthambisa kunye nokutya okutyebileyo ukusuka ekhitshini ukuya kwigumbi.
Iyunithi kunye nayo yonke imixholo yayo emitsha ibandakanya umoya womoya, iTV ye-Intanethi (i-Cellcom TV converter ebandakanya iNetflix, amajelo kunye nee-apps), ikhitshi elixhotyisiweyo kunye nezinto ezininzi ezimangalisayo zaseGalile ezivela kwigadi yemifuno kunye neyenziwe ekhaya.
Iveranda enkulu yabucala kwaye ukusuka apho ukuphuma ukuya kwindawo yokuhlala kwi-terrace isesandleni sakho kuphela.
IHararit yindawo yokuhlala yaseMitzpe Nof ekupheleni kwentaba,
Ininzi kwiingcali zonyango ezigqwesileyo kumayeza aseTshayina, i-acupuncture, i-naturopathy, iindidi zeengcali zokuchukumisa, abancedisi benkqubo kunye nezithethe. Ukuziqhelanisa neYoga kunye nokucamngca. Siya kukuvuyela ukudibanisa kunye nokucebisa isisombululo esifanelekileyo sohlobo lwamava oya kubuza wona.
Ukuhamba okufutshane ukuya kwindlela yeemonki kunye neLavra Netofa.
Ifestile kunye nebalcony yeyunithi ijonge entliziyweni yeNtlambo yeNetofa (ukusuka kuLwandle lwaseGalili ukuya elunxwemeni). Indawo enomtsalane yeentaka ezibhabhayo nezifudukayo kunye neentaka ezidla inyama. Kwaye ebusuku, silindele iinkwenkwezi.
Ngaphaya koko, iHararit-Yahad luluntu olunemibala kwaye olukhethekileyo olukwaziyo ukubhiyozela ubomi.
Umbuki zindwendwe ngu- Rotem
Kungcono ubhale i-Botsap, kukho ukufunxa kancinci apha ngamanye amaxesha uyaphoswa yiminxeba. Kuyenzeka ukuba ufuna ukuqhagamshelana nobudala 0505708699